I-Annealing Titanium Fasteners With Heater Induction
Ikhaya / izicelo / Ukunyuselwa kweNkcazo / Isihlomelo seTitanium sokuQinisa ngokuKhupha
Udidi: Ukunyuselwa kweNkcazo tags: izikhonkwane ezikhawulezayo, isixhobo esikhulayo seTitanium, induction isebenze Titanium, induction Titanium isongezo, I-Titanium Fasteners, I-Titanium Fastators Annealing
Injongo Ukutshisa i-titanium fastener ukuya kwi-1100-1450ºF (593-788ºC) yenkqubo yokubamba.
Impahla engu-0.06 "(1.5mm) kwindawo ephezulu kwisilinganisi se-titanium esilinganisa u-0.163-0.375" (4.14-9.52mm) ububanzi kunye no-0.5-3.0 ”(12.7- 76.2mm) ubude
Ukushisa 1100-1450ºF (593-788ºC)
Ukuphindaphinda 150 kHz
Izixhobo • Inkqubo yokufudumeza i-DW-UHF-20kW, exhotyiswe ngesihloko esisebenza kude esiqukethe i-capacitor eyodwa ye-0.66μF.
Inkqubo I-coil ye-plate concentrator yeplate isetyenziselwa ukufudumeza i-fastener ye-0.2 imizuzwana. Le yinkqubo ezenzekelayo ebandakanya ukubekwa kweerobhothi kwezahlulo kwikhoyili ukusuka kwisitya esityiweyo ngelixa iargon yeArgon izaliswe ngamanzi ukuthintela igcwala. Amalungu aqhutywa kwinqanaba lamawaka ayi-1000 ngomzuzu.
• Unokufakwa ngokulula ngokukhetha kunye nokubeka i-robotics.
• Inkqubo engenabala.
• Ukutshaya kuncinci kwindawo ethile.